UDE GEA UZIMISELE NGOKUGUGELA KWI-MAN UNITED – Sivubela intuthuko Newspaper
Unozinti weMan United uDavid De Gea ozimisele ngokuhlala iminyaka kuleli qembu
UNOZINTI weqembu laseNgilandi iManchester United uDavid De Gea waseSpain useveze ukuthi uzimisele ngokugugela kuleli qembu lase-Old Trafford.
Lo nozinti oneminyaka engama-29 uke wafunwa amanye amaqembu okuhlanganisa neReal Madrid kodwa wakhetha ukuhlala namaRed Devils. UDe Gea kuthe ngonyaka owedlule walula inkontileka njengoba izoze iphele ngonyaka ka-2023. Usehlale iminyaka eyisishiyagalolunye kuleli qembu njengoba alijoyina ngonyaka ka-2011.
” Ukuhlanganisa iminyaka eyishumi kuleli qembu kufana nephupho. Kuyajabulisa ukuba Inxenye yeqembu , futhi ngiyafisa ukuhlala iminyaka engaphezulu kunalena,” esho njengoba maduzane ezohlanganisa iminyaka eyishumi.
I-United ike yangenza Kahle kwimidlalo yayo yakamuva kodwa ukufika komdlali wasesiswini uBruno Fernandes kulethe olukhulu ushintsho. Lo nozinti ukholwa ukuthi ukumiswa kwemidlalo ngenxa yegciwane icoronavirus kufike Kabi njengoba besebeqala ukuhlangana.
“Ngikholwa ukuthi iqembu bese liqala lenza Kahle njengoba beselisefomini enhle. Asizange singenelwe amagoli amaningi, nokufika kukaBruno kulethe uzinzo kwazise uwumdlali osezingeni wasesiswini,” kusho De Gea.
Leli qembu linamaphuzu angama-45 emva kwemidlalo engama-29 kanti selingenelwe amagoli angamashumi amathuthu , lakwazi ukuthi lingangenelwa igoli kwimidlalo eyisishiyagalombili.